Abe Bill and Melinda Gates Foundation Bagqiba Uhlelo Lwezindlu zeDzivarasekwa
Mabasa 21, 2015
Abenhlanganiso yeBill and Melinda Gates Foundation besakhela abantu izindlu eZimbabwe
Abenhlanganiso ye Bill and Melinda Gates Foundation sebegqibe uhlelo lwabo lweminyaka emihlanu lokwakhela uzulu izindlu ezingamakhulu phose amahlanu-480, ezingaduliyo olubelendleko yezigidi ezinhlanu zamadollar-$5million. Lolu hlelo oluphawulwe NgoLwesibili lugqutshwe ngokusebenzelana lomanisipala weHarare.
Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso le uMelanie Walker oze eyimele emkhosini wokuphawula lezi zindlu uthi lanxa lolu hlelo lugqitshwa lonyaka ulokuthaba okukhulu ngoba ikhansili yeHarare ithembise ukuthi izathatha isibonelo esihle sokwakhela uzulu umhlobo wezindlu ezinje ezingaduliyo kwezinye indawo zaleli dolobho.
U Mayor we Harare, umnumzana Benard Manyenyeni, utshele umbuthano wokuphawula okusemthethweni lezi zindlu emzini we Dzivarasekwa ukuba bazathatha lolu hlelo njengesibanga sakuqala sokuluqelisa ukuze lufinyelele eminye imizi yaleli dolobho.
Inhloso kamanisipala, uManyenyeni uthi, yikwakhela uzulu ohlala endaweni ezingamatshumi ezedlula ayisithupha-63, ezingekho emthethweni, izindlu ezedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu-105 000, kusiyaphela umnyaka ka 2018.
UManyenyeni uthi kuyancomeka ukuba idolobha leHarare kube yilona elingelakuqala ukuphatheka kunhlelo zaloluhlobo.
Ingxenye yezigidi ezinhlanu zamadollar esetshenziswe kulolu hlelo inikezwe uzulu ohlala endaweni lezi ezingekho emthethweni kuthi enye yanikezwa umanisipala.
Ubekhona uzulu ovele kwezinye zendawo ezibikwa zihlalwa okungekho emthethweni, ezibalisa amalunga enhlanganiso ye Zimbabwe Homeless People’s Federation, abavele e Gunhill.
Omunye weziphathamandla ze ZHPF, unkosikazi Sazini Ndlovu uncome kakhulu abasungule loluhlelo ngoba seluguqule indawo ebisesabeka ukuba ngengahlalwa ngabantu kungekho kwesaba.
Ngaphandle kokwakha izindlu, kwakhiwe njalo indawo lapho okungaqhutshelwa khona imisebenzi eyehlukeneyo yokuthuthukisa inhlalakahle kazulu eyeCommunity Centre kuveza uSibanda.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Lwazi Knowledge Tshuma wasendaweni ye Gunhill, othi loluhlelo le Bill and Melinda Gates Foundation, lubasize kakhulu ngoba sebezakwenelisa ukuthola izindlu ezizinzileyo zokuhlala ngokusemthethweni njalo ngendlela ehlelekileyo.
Ekugqitshweni kwaloluhlelo lwe Dzivarasekwa, umanisipala uthi uzaqhubeka ayesungula umsebenzi ofanayo lapho uzulu ahlezi okungekho emthethweni emzini we Gunhill, okuzaphathisa ukutholisa imhuli ezedlula ezilikhulu lamatshumi amabili - 121.